Xildhibaan Faarax C/qaadir oo ka hadlay xaalada dalka, doorashooyinka soo socda, shirarka beelaha ku yeelanayaan Muqdisho iyo... - Jowhar Somali news Leader
Home News Xildhibaan Faarax C/qaadir oo ka hadlay xaalada dalka, doorashooyinka soo socda, shirarka...
Xildhibaan Faarax C/qaadir oo ka hadlay xaalada dalka, doorashooyinka soo socda, shirarka beelaha ku yeelanayaan Muqdisho iyo…
Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay doorashooyinka soo socda, khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada, amniga dalka iyo shirarka ay Caasimadda ku yeelanayaan Beelaha Soomaalida.
Xildhibaanka oo wareysi siiyay TV-ga Somali Cable ayaa sheegay in Saddexdii sano ee ina dhaaftay aysan wixii laga filanayay qaban dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, isagoo carabka ku goday iney dib u dhac dalka u horseedeen.
Waxyaabaha uu dowladda ku dhaliilay waxaa ka mid ah dagaalo uu sheegay iney ku qaaday magaalooyinka Dhuusa-Mareeb iyo Baydhabo oo ay dad ku dhinteen iyo weerarka gobolka Gedo ee ka dhanka ah Maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Axmed Madoobe.
Waxa uu sheegay in xiligan aan la filaneynin in Ciidamadii bedeli lahaa kuwa AMISOM ee waqtigooda dhamaadka yahay haatan loo weeciyo iney weeraro ku qaadaan deegaano nabdoon oo ay hore u joogeen Ciidamo dowladda hoos taga oo dadka ka difaaca Shabaab iyo duulaanadooda, isagoo ka digay in dagaal siyaasadeed Ciidamada la galiyo.
Xildhibaan Faarax C/qaadir ayaa dhinaca kale mar uu ka hadlayay khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada ku sheegay iney ka mid tahay waxyaabaha dib u dhigay dadaalada loogu jiro sidii hoos loogu sii daadajin lahaa nidaamka dowladnimada ee dalka.
Madaxda sare ee dalka ayuu u sheegay in mar kasta iyaga ay yihiin kuwa laga rabo iney tanaasulaan oo ay ka shaqeeyaan sidii ay u xoogeysan leheyd wada shaqeynta ka dhaxeysa dowladda iyo maamul goboleedyada.
Xildhibaan Faarax ayaa ugu danbeyn soo hadal qaaday shirarka ay beelaha ku yeelanayaan magaalada Muqdisho, shirarkan ayuu ku sifeeyay iney yihiin kuwo looga tashanayo sidii marxalada adag ee uu dalka ku sugan yahay wax looga qaban lahaa oo aanu haatan joogin meel lagu fiirsan karo.
Hoggaanka beelaha Muqdisho ayuu tilmaamay in sababta ay u shirayaan beelaha Muqdisho ay tahay cadaadis iyo caburin lagu hayay, taasoo ay qeyb ka tahay in la xanibay dhaq dhaqaaqoodii.